Broadband အလင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက် - News - Box Optronics
Broadband အလင်းအရင်းအမြစ်များ isavery stable light source, which originated fromacompany named IR in the United States. This kind of light source has wide frequency band, low degree of polarization and high power to ensure its stability. The broadband အလင်းသတင်းရင်းမြစ် hasawide range of wavelengths, even up to 350 nm. The high-energy light-emitting diodes help it control its stability accurately. Once we set up all the bands, this broadband အလင်းသတင်းရင်းမြစ် can be used in all the communication windows. High speed external modulator can cooperate with lock-in amplifier to measure and communicate data with high sensitivity. The low degree of polarization ensures high accuracy and consistent measurement results.
ဒီမျိုး၏ရောင်စဉ်broadband အလင်းသတင်းရင်းမြစ်အနိမ့်ဆုံး ၆၀၀ nm၊ အမြင့်ဆုံး 1600 nm သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်၊ coherence သည်အလွန်နိမ့်သည်။ ဗဟိုလှိုင်းအလျားကိုရွေးနိုင်သည်။ ပါဝါသည်အလွန်မြင့်မားပြီးတည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။ မည်သည့်ကိရိယာ၊ module သို့မဟုတ် desktop မဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်broadband အလင်းသတင်းရင်းမြစ်လူတန်းစားအမျိုးမျိုးကိုလူအများအပြားအသုံးပြုကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သည်လည်းအဆင်ပြေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းကို optical fiber sensing စနစ်၊ fiber optic gyroscope, optical testing tool စသည်တို့မှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။broadband အလင်းသတင်းရင်းမြစ်, နှင့်ပင်ကျယ်ပြန့် passive အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုသည်နှင့်လည်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်စစ်ရေး၏သုတေသနအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
optical fiber နှင့် cable စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏အတိုချုပ်နိဒါန်း
5G နှင့် FTTH တို့သည် ၂၀၂၅ တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆.၈၁ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိရန် SM အမျှင်များ၏စျေးကွက်ကိုမြှင့်တင်သည်